Cream-yada Dumarku Ay Isku Qurxiyaan Iyo Cadarrada Oo Caruurta U Keena Cudurkaan - Daryeel Magazine
Cream-yada Dumarku Ay Isku Qurxiyaan Iyo Cadarrada Oo Caruurta U Keena Cudurkaan
Kiimikooyinka haweenku isku qurxiyaan, caddaradda iyo daawooyinka qaar, ayaa khubaro u dhalatay dalka Ingiriisku ka soo saareen digniin ku saabsan in ay ubadka ku keenaan xannuunka xiiqda.
Dhakhaatiirtan waxay ogaadeen in ubadka uurka ku jira ay 78% xannuunkan halis ugu jiraan marka hooyadood isticmaasho daawooyinka la isku qurxiyo iyo cadarada sida ay Arbacadii ay digniinta kus oo saareen khubaradan.
Khubaradan waxay tilmaameen in kiimikooyinkan ilmaha yar ee uurka ku jira hawada uu qaadan lahaa ka wasakhaeeyaan, isla markaana ay si deg deg ah xannuunka xiiqda u qadaan markay soo dhashaan.
Waxay u soo jeediyeen cilmi-badhayaashan waalidiinta in ay hoos u dhigaan isticmaalka caddarada iyo waxyaabaha la isku qurxiyo amma saabuunta iyo daawooyinka wax lagu maydho si caafimaadka ubadkoodu u noqdo mid fiican.
Cilmi-badhayaashan oo ka tirsan Jaamacadda Columbia ee magaalada New York, ayaa baadhitaan ku sameeyey kaadida 300 haween ah, kadibna su’aalo waydiiyey hooyooyinkaas markii ubadkoodu 5 jir ilaa 11 gaadheen, kuwaasoo ka baadhay in ay leeyihiin cudurka asmada, waxaanay ogaadeen in hooyooyinka isticmaalka kiimikada wejiga lagu qurxiyo iyo cadarrada badan ay ubadkoodu xiiq qadeen 78% marka loo eego kuwa aadka u yaraysta.
“Waxa jira kiimikooyin aad loo isticmaalo, xadi badana laga isticmaalo, halkana aan lagu soo koobi Karin oo ubadka ku keena xiiqda, waxaana wanaagsan in qoyska baha ka fogaado ay wax ku kaydsadaan oo ay isticmalaan talaajadaha. Sidoo kale dumarku waa in ay yaraystaan markay
Dhibaatada Dawooyinka Dumarku Isku Cadeeyaan Maxaa Keena Cambaarta? Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Sababaha Keena Cidhiidhiga Neefsiga Iyo Qaababka Ugu Habboon Ee Loo Daweyn Karo